The vasingabhadharwi ropa mupiro basa muna Taibao Group - China Shandong Zhongbaokang Medical
The vasingabhadharwi ropa mupiro basa muna Taibao Group
On June 12,2017, Taibao Group compined Zibo Blood Center chirongwa vape ropa, vanosvika 220 vashandi muchirongwa mupiro vachishingaira. Pana 8:30 am, The paburiro Taibao Group mudonzvo resitorendi wokutanga akava pfupi ropa mupiro mukamuri, nzvimbo yakakamurwa kupinda kubvunzana nharaunda, kuonekwa nharaunda, ropa nzvimbo uye nedzimwe nzvimbo. Vanopfuura gumi nevaviri ropa vanamukoti vakatakura nyanzvi yokuedzwa uye ropa muunganidzwa midziyo kutanga basa. In basa, Taibao Group Sachigaro Gong Duanzhou aitungamirira iri vasingabhadharwi ropa mupiro akati ropa mupiro basa rave akarongwa neZvapupu Taibao Group kashanu. nguva ino, vanopfuura 500 vashandi andave chikumbiro mhinduro, uye pakupedzisira isu sanangurai vamwe vashandi vakanga vachiwirirana mamiriro kuitawo ropa iri vasingabhadharwi kuzozvidzorerwa. Kubatanidzwa vasingabhadharwi ropa kuzozvidzorerwa kwete chete runogonesa rudo uye basa vashandi, chinotuma vanhu vakawanda kuti vazive uye kubatanidzwa vasingabhadharwi ropa kuzozvidzorerwa, asi kunobatsirawo vanhu vakawanda vanoda rubatsiro. Tinoda kuronga zvakadai hunogutsa mabasa sezvo mutoro mumagariro vachida. Pazuva iroro, Taibao Group, dzinosvika vashandi vane hanya 220 munyaya zvokuzvidira ropa mupiro mabasa, inzwi ropa tinofanira kugara uchibata anenge Exchange 60000 Rine mamiririta. Panopera ropa kuzozvidzorerwa, vashandi vagamuchirawo matkamuistoja inopiwa neropa peguta uye mafuta dzinodyiwa, mazai uye dzimwe muviri zvokuwedzera inopiwa Taibao Group.
Post nguva: Aug-02-2018